Ukuphathwa kwe-COPD - Iplatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ukuphathwa kweCOPDIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-06-29T17:44:12+02:00
Uma ukhona utholwe une-COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), kubalulekile ukwazi ukuthi ungasilawula kanjani isimo sakho. Yize lungekho ikhambi le-COPD, ukuphathwa okuhle kungasiza ekunciphiseni ukuqhubekela phambili kwayo, kunciphise ubungozi bokukhuphuka nokugcina izimpawu zilawulwa.
Ilawulwa kanjani i-COPD?
I-COPD ilawulwa ngokwelashwa okunhlobonhlobo nezinguquko zokuphila okunempilo. Bangu izigaba ezahlukahlukene zeCOPD, ngakho-ke uhlelo lokwelashwa nokuphathwa okunconyelwe wena kungahle kwehluke kancane kumuntu otholwe enecala elibi noma elinzima kakhulu le-COPD.
Ezinye ezejwayelekile Ukwelashwa kwe-COPD okungabekwa kufaka:
Imithi ehogelwayo ebizwa ngama-bronchodilators, esiza ukukhulula imisipha ezungeze umoya wakho
Ama-inhalers e-Steroid ukunciphisa ukuvuvukala ezindleleni zakho zomoya
Ukwelashwa kwe-oksijeni uma unamazinga aphansi oksijini wegazi
Uhlelo lokuvuselela amaphaphu ukukusiza ufunde ukuphefumula kalula.
Ezimweni ezimbi kakhulu, futhi uma ezinye izindlela zokwelapha zingasebenzi, kungaphakanyiswa ukuhlinzwa ukuze ususe izingxenye ezilimele zamaphaphu akho.
Ukuzivocavoca kokuphathwa komoya kweCOPD
Ukuphefumula kuyisihluthulelo uphawu lwe-COPD, kanjalo nokufunda izindlela zokuphefumula futhi izivivinyo zokuphathwa komoya ingakusiza ukuphatha ngokuphumelelayo. Ukuzivocavoca okunjengezindebe ezilandelwe noma amasu e-diaphragmatic kufanele ukwenze njalo. Bangasiza ekuqiniseni imisipha oyisebenzisela ukuphefumula futhi ikhulise ukuzethemba kwakho, ngakho-ke uzokwazi ukuthi ungaziphatha kanjani izinto uma kwenzeka izimpawu.
Kungabonakala kunzima ukuzivocavoca ne-COPD, kepha ukuzivocavoca njalo kungasiza ekunciphiseni ezinye zezimpawu zakho futhi kuyinto ebalulekile ekuphathweni kwakho kwe-COPD. Imisebenzi efana nokuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, noma ukuzivocavoca amandla kuyasiza kuwe ngokomzimba, kodwa futhi kulungele nempilo yakho engokomzwelo.
Ukuzijwayeza ukuzivocavoca ukuphefumula kuzokubeka ethubeni elihle lokwenza imisebenzi engaphezulu yomzimba, njengoba uzoba nekhono lokuphefumula ngokufanele izidingo zakho futhi kuzothuthukisa ukuthi ungakanani umzimba okwazi ukukwenza.
Njengezinye izimo eziningi zempilo, ukudla ukudla okunomsoco okunempilo kuyazuzisa. Uma ukhuluphele ngokweqile, ungakuthola uphefumula ngokwengeziwe ngakho-ke ukwehlisa isisindo kungasiza. Ukuhlanganisa ukudla okunempilo nokuvivinya umzimba njalo kungasiza kukho kokubili ukwehlisa nokugcina isisindo.
Ukuphila kahle ngokomzwelo
Ukuphila ne-COPD kungabeka ubunzima empilweni yakho engokwengqondo nengokomzwelo, futhi kungaba nzima kubangani noma emndenini ukukubona ungaphilile. Ukubhekana njalo nezimpawu ze-COPD, njengokukhwehlela nokuphefumula, kungakucoboshisa kukushiye uzizwe ukhathazekile, ucindezelekile noma uphansi. Ngokulandelayo, lokhu kungakwenza ube mancane amathuba okuba usebenze, okungaba nomthelela ezimpawu zakho zomzimba.
Kubalulekile ukuzibheka futhi uthathe isikhathi sokuziqeqesha. Yenza isikhathi sokugxila kuwe, kungaba ukufunda incwadi, ukubukela ifilimu, noma ukuyophuza ikhofi. Khuluma nabanye abantu mayelana nokuthi uzizwa kanjani futhi ucabangele ukuthola iqembu lendawo noma le-inthanethi ukuze ujoyine. Ukukhuluma nomeluleki nakho kungasiza. Awudingi ukuphatha i-COPD wedwa.
Imigomo kanye ne-COPD
I-COPD ingakhuphula ubungozi bakho ekuthelelekeni futhi yenze kube nzima ukulwa nayo. Kubalulekile ukuthi ube nomkhuhlane wonyaka womkhuhlane, ukugoma i-pneumococcal (a-off), futhi COVID-19 imigomo. Uma ungamenyiwe ngokuzenzekelayo ukuba ube nazo, khuluma nodokotela womndeni wakho.
Luyini uhlelo lokuphathwa kweCOPD?
Uhlelo lokuphathwa kweCOPD luyisiqondiso sokuthi ungasiphatha kanjani isimo sakho usuku nosuku. Lapho uthola ukuthi unesifo, kungenzeka ukuthi udokotela wakho nethimba lezokwelapha bazokusiza ukuhlanganisa uhlelo lokuzilawula, ukuze ukwazi ukuqonda izisekelo zendlela engcono yokuphatha lesi simo.
Uhlelo lokuphathwa kweCOPD lwenzelwe izidingo zakho futhi luzohluka ngokuya ngesigaba iCOPD yakho ekuso. Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani kubalulekile ukuba nokuhlolwa njalo nokubuyekezwa kwezokwelapha, ukuze intuthuko yakho ibhekwe futhi uhlelo lwakho lokuphatha lulungiswe.
Uhlelo lwakho kufanele lubandakanye imishanguzo enqunyiwe, izivivinyo zokuphefumula, nokudla kanye nokuzivocavoca umzimba okuhle kakhulu, nokusekelwa okungokomzwelo. Enye ingxenye esemqoka yohlelo lokuphathwa kweCOPD ukugwema izimbangela ezingaba khona lapho kungenzeka khona. Lokhu kusiza ukunciphisa ingozi yezimpawu eziba nzima noma ukudala ukuqhuma.
Ezinye zezimbangela ezivamile zezimpawu zeCOPD ukuvezwa ukungcoliswa komoya, intuthu kagwayi, intuthu yethrafikhi, ukubhema ugwayi nothuli. Uma njengamanje ubhema, kuyalulekwa ukuthi yeka ukubhema ukusiza i-COPD yakho. Ucwaningo luye lwathola ukuthi ukuyeka ukubhema kunganciphisa ingozi yokulaliswa kweziguli ze-COPD.
Yini ukwelashwa okungcono kakhulu kwe-COPD enamandla?
Akukho ukwelashwa okungcono kakhulu kwe-COPD enamandla - ukwelashwa okunconyelwa udokotela wakho kuzoxhomeka ngokuphelele kwizimpawu nezimo zakho, futhi ukwelashwa kwakho kuzohambisana nezidingo zakho. Nge-COPD enamandla, kungenzeka ukuthi udinga inhlanganisela yokwelashwa, hhayi ukwelashwa okukodwa.
Ezimweni ezinzima ze-COPD, kwesinye isikhathi ukuhlinzwa kuyadingeka ukuze kususwe izingxenye ezilimele zamaphaphu, okuvumela izingxenye ezinempilo ukuthi zisebenze kangcono. Ezimweni ezimbalwa zamacala, ukufakelwa kwamaphaphu kungaba yindlela.
Kubalulekile ukuthi unamathele enkambisweni ebekiwe futhi uhlele nganoma imiphi imithi oyibekiwe, ngoba lokho kuzokunikeza ithuba elihle lokunciphisa izimpawu nokugwema ukulaliswa esibhedlela.
Yiluphi ukwelashwa kwakamuva kweCOPD?
Ukucwaninga nge-COPD kuyaqhubeka futhi njengoba kutholakala ukwelashwa okusha, kancane kancane bayatholakala ukuze bazame. Kuthatha isikhathi ukuthi ukwelashwa okusha kuvunyelwe, yize ungakwazi ukufinyelela esivivinyweni somtholampilo. Khuluma nodokotela wakho mayelana nokuthi yini etholakalayo esifundeni sakho nokuthi ngabe ungumuntu ofanelekayo yini.
Enye yezindlela zokwelashwa kwe-bronchodilator entsha yeziguli ezinzima ze-COPD yiRoflumilast, engasiza nge-bronchitis engapheli kanye nomlando wokukhula okuvamile. Iphathwa ngendlela yamaphilisi futhi isiza ukunciphisa ukuvuvukala ezindleleni zomoya nasemaphashini.
Ukuhlinzwa kwe-valve ye-Endobronchial kuyindlela entsha yokungenelela kokuhlinzwa okuqondiswe kubantu abane-emphysema enamandla. Kubandakanya ukubeka ama-valve amancane e-Zephyr® ezindleleni zomoya ukuvimba izingxenye zamaphaphu ezilimele. Le nqubo ingasiza ukunciphisa ingcindezi ku-diaphragm yakho, isize izingxenye ezinempilo zamaphaphu akho ukuthi zisebenze kahle, futhi zinciphise nokuphefumula.
Ngokuzayo, kungenzeka ukuthi izidakamizwa ze-biologic ze-COPD zingaba yindawo evamile. I-Biologics yizidakamizwa ezenziwe noma eziqukethe imithombo yezinto eziphilayo futhi zingasiza ekwelapheni nasekuvimbeleni ukuvuvukala ezindleleni zomoya. Ucwaningo luyaqhubeka ekusebenzeni kokwelashwa kwe-biologic kwe-COPD.
Thola ukuthi ungayiphatha kanjani kangcono i-COPD yakho ngokusebenzisa zokwelapha futhi umzimba.
I-BNF. Isifo se-pulmonary esingamahlalakhona.
Kusumoto M, Mathis BJ. 2021. Ukwelashwa Kwe-Biologic Ye-Asthma ne-Chronic Obstructive Pulmonary Disorder. Ukungezwani komzimba, 92-107.
Incwadi ye-MSD. Izifo Eziphuthumayo Zokuvimbela Izifo (COPD).
KUHLE. 2019. Isifo esingapheliyo sokuphazamiseka kwamaphaphu kuma-16s: ukuxilongwa nokuphathwa. Umhlahlandlela we-Nice NG115.
KUHLE. 2016. Isifo esingapheliyo sokuvimbela kwamaphaphu kubantu abadala. Ikhwalithi ejwayelekile ye-QS10.
UVan Dijk M, uGan CT, uKoster TD et al. 2020. Ukwelashwa kwe-COPD ezinze kakhulu: indlela enhlobonhlobo yezici ezilaphekayo. I-ERJ Open Research 2020 6: 00322-2019; I-DOI: 10.1183 / 23120541.00322-2019